အကြမ်းဖက်ဝါဒ - ဝီကီပီးဒီးယား
၂၀၀၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၁ တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ပွားစဉ်အတွင်း နယူးယောက်စီတီးရှိ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးစင်တာအား United Airlines Flight 175 က တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားနေပုံ
အကြမ်းဖက်ဝါဒ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်များ အထမြောက်အောင်မြင်ရန် သာမန်ပြည်သူများအပေါ် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ဥပဒေမဲ့ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ယင်းအား ငြိမ်းချမ်းရေးကာလအတွင်း အကြမ်းဖက်မှု သို့မဟုတ် လက်နက်ကိုင်မဟုတ်သူများအပေါ် စစ်ရေးပြုခြင်းများအပေါ် ရည်ညွန်းသည်။ အကြမ်းဖက်သမားနှင့် အကြမ်းဖက်ဝါဒ ဆိုသောအသုံးအနှုန်းသည် ၁၈ ရာစုနှောင်းပိုင်း ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးတွင် စတင်သုံးစွဲခဲ့ပြီး ၁၉၇၀ ခုနှစ်များကာလ မြောက်အိုင်ယာလန် ပဋိပက္ခ၊ အစ္စရေး-ပလက်စတိုင်း ပဋိပက္ခတို့တွင် နိုင်ငံတကာ၏ အရေးစိုက်ခြင်းကို ခံရသည်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၁ တိုက်ခိုက်မှုအပြီး နယူးယောက်စီးတီး၊ ပင်နီဆလဗေးနီးယားပြည်နယ်တို့တွင် အသေခံတိုက်ခိုက်မှုများ တိုးပွားလာခဲ့သည်။
ဘုံသဘောတူညီမှုမရှိဘဲ အကြမ်းဖက်ဝါဒနှင့် သက်ဆိုင်သော အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ပေါင်းများစွာ ရှိနေသည်။ အစိုးရများနှင့် နိုင်ငံမဲ့အဖွဲ့အစည်းများက အတိုက်အခံအဖွဲ့အစည်းတို့ကို နာမည်ပျက်စေရန် ယင်းအသုံးအနှုန်းကို သုံးစွဲလေ့ရှိကြသည်။ ကွဲပြားခြားနားသော နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများက သူတို့၏ရည်မှန်းချက်များ အောင်မြင်ရန်အလိုငှာ အကြမ်းဖက်ဝါဒကို အသုံးပြုသည်ဟု စွတ်စွဲခံရလေ့ရှိသည်။ ယင်းတို့တွင် လက်ယာစွန်းနှင့် လက်ဝဲစွန်း နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ အမျိုးသားရေးအဖွဲ့များ၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့များ၊ တော်လှန်ရေးသမားများနှင့် အုပ်ချုပ်သူအစိုးရတို့ ပါဝင်သည်။ နိုင်ငံအများအပြားတွင် အကြမ်းဖက်ဝါဒအား ရာဇဝတ်မှုအဖြစ် ကြေညာရန် တရားဥပဒေပြုကြသည်။ အကြမ်းဖက်ဝါဒအား နိုင်ငံများကိုယ်တိုင် ကျူးလွန်သောအခါ ယင်းအား အကြမ်းဖက်ဟု မသုံးနှုန်းတော့ပဲ မီးခိုးရောင်ဧရိယာ ပြဿနာဟု ခေါ်ဆိုသည်။ အကြမ်းဖက်ဝါဒအား စစ်ရာဇဝတ်မှုဟု သတ်မှတ်သင့်သည်ဟု အများသဘောတူညီချက် မရှိပေ။ မေရီလန်း တက္ကသိုလ်မှ ပြုစုထားသော The Global Terrorism Database အရ ၂၀၀၀ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကြားတွင် နိုင်ငံအခြေပြုမဟုတ်သော အကြမ်းဖက်မှု ဖြစ်စဉ်ပေါင်း ၆၁၀၀၀ ရှိခဲ့ပြီး အနည်းဆုံး လူပေါင်း ၁၄၀၀၀၀ သေဆုံးခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
↑ "Do Terrorists Win? Rebels' Use of Terrorism and Civil War Outcomes" (May 20, 2015). International Organization 69 (3): 519–556. doi:10.1017/S0020818315000089.
↑ Wisnewski၊ J. Jeremy, ed. (2008)။ Torture, Terrorism, and the Use of Violence (also available as Review Journal of Political Philosophy Volume 6, Issue Number 1)။ Cambridge Scholars Publishing။ p. 175။ ISBN 978-1-4438-0291-8။ 18 August 2021 တွင် မူရင်းမှ မော်ကွန်းတင်ပြီး ။4September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Stevenson၊ Angus, ed. (2010)။ Oxford dictionary of English (3rd ed.)။ New York: Oxford University Press။ ISBN 978-0-19-957112-3။
↑ Halibozek၊ Edward P.; Jones၊ Andy; Kovacich၊ Gerald L. (2008)။ The corporate security professional's handbook on terrorism (illustrated ed.)။ Elsevier (Butterworth-Heinemann)။ pp. 4–5။ ISBN 978-0-7506-8257-2။ 27 August 2021 တွင် မူရင်းမှ မော်ကွန်းတင်ပြီး ။ December 17, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၅.၀ ၅.၁ Mackey၊ Robert။ "Can Soldiers Be Victims of Terrorism?"၊ The New York Times၊ November 20, 2009။4September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 12 June 2011။ "Terrorism is the deliberate killing of innocent people, at random, in order to spread fear throughawhole population and force the hand of its political leaders."
↑ Sinclair၊ Samuel Justin; Antonius၊ Daniel (2012)။ The Psychology of Terrorism Fears။ Oxford University Press, US။ p. 14။ ISBN 978-0-19-538811-4။ 14 August 2021 တွင် မူရင်းမှ မော်ကွန်းတင်ပြီး ။4September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ White၊ Jonathan R. (January 1, 2016)။ Terrorism and Homeland Security။ Cengage Learning။ p. 3။ ISBN 978-1-305-63377-3။ 16 August 2021 တွင် မူရင်းမှ မော်ကွန်းတင်ပြီး ။4September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Ruthven၊ Malise; Nanji၊ Azim (April 24, 2017)။ Historical Atlas of Islam။ Harvard University Press။ ISBN 978-0-674-01385-8။ 14 August 2021 တွင် မူရင်းမှ မော်ကွန်းတင်ပြီး ။4September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Terrorism"။ Encyclopædia Britannica။ p. 3။ 18 August 2021 တွင် မူရင်းမှ မော်ကွန်းတင်ပြီး ။ September 8, 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၀.၀ ၁၀.၁ Majoran၊ Andrew။ "The Illusion of War: Is TerrorismaCriminal Act or an Act of War?"၊ Mackenzie Institute၊ August 1, 2014။4September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 31 December 2020။
↑ Eviatar၊ Daphne (June 13, 2013)။ Is 'Terrorism'aWar Crime Triable by Military Commission? Who Knows?။ 11 October 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။4September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Global Terrorism Index 2015။ Institute for Economics and Peace။7February 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။4September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အကြမ်းဖက်ဝါဒ&oldid=696444" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၄:၅၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။